चोरले रित्तो बनाए स्कुल, पाँच वर्षमा १० पटक चोरी
Nasoo - नासो संवाददाता || २०७८ कार्तिक १८ बिहिबार
मान बहादुर कुँवर,जुम्ला
१८ कार्तिक, जुम्ला । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका १ मा अवस्थित गंगा माद्यमिक विद्यालय पेरे चोरले रित्तो बनाएका छन् । पेरे गाउँ बाट झण्डै एक किमिको दुरिमा रहेको यो विद्यालयमा पाँच वर्ष भित्र १० पटक चोरी भएको छ । बारम्बार चोरि हुँदा एकातिर विद्यालय रित्तो बनेको छ भने, अर्कोतिर शैक्षिक गुणस्तर बिथोलिएको छ ।
चोरले कार्यालयमा राखिएका शैक्षिक सामाग्रि चोर्नेे तथा विद्यार्थिका शैक्षिक प्रमाणपत्र, विद्यालयका महत्पुर्ण कागजात जलाउने गरेका छन्, जसले गर्दा विद्यालय असुरक्षित बन्दै गएको छ । यो विद्यालयमा सरकारको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ । विद्यालय समाजको ऐना हो भनिन्छ । विद्यालयको भौतिक अवस्था, शिक्षक व्यवस्थापन, समुदायको निगरानी र न्युनतम शैक्षिक सामाग्रिको उपलव्धता आदिले विद्यालयको वास्तविक चित्रण गर्दछ ।
गंगा मा.वि. पेरेमा भने विद्यालयका काजगात, विद्यार्थीका शैक्षिक प्रमाण पत्र, विद्यालयले खेल क्षेत्रबाट आर्जन गरेका कप समेत चोर बाट बचाउन घरमा लुकाएर राख्नु पर्ने बाध्यता छ । ‘विद्यालय जस्तो पवित्र ठाउँमा समेत निरन्तर चोरी भइरहेको छ, यति ठुलो शैक्षिक संस्था समेत सुरक्षित छैन, मनमा अनेक कुरा खेलिरहन्छन्, पढ्ने मन पटक्कै लाग्दैन ।’ कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्र धर्मसिंह बुढा ले भने । ‘ल्याबका सामाग्रि एक दिन पनि प्रयोग नगरेरै तोडफोड भए, कम्प्युटर पनि सिक्न नपाएरै चोरको हातमा पर्यो ।’ उनले थपे ।
अहिलेको प्रतिस्पर्धाको युगमा विद्यालयको यो भद्रगोल अवश्थाले विद्यार्थीहरुमा नैरास्यता छाएको छ । ‘जुन विद्यालयमा विद्यार्थीका शैक्षिक प्रमाण पत्र जल्छन् त्यो विद्यालयले भविष्यमा कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, हामीलाई पढ्ने वातावरण नै छैन ।’ छात्र भुवन बुढाले गुनासो गरे । विगत केही वर्ष पहिले सम्म त यो विद्यालयमै पुगेर छात्राहरुलाई जर्वजस्ती तानेर श्रीमति बनाउने गरिन्थ्यो । विस्तारै यो कुप्रथा हट्दै गएको छ ।
‘यो क्षेत्रका छात्राहरु अशिक्षित समुदायका कारण अनेकौं समस्या सँग जुधिरहनु परेको छ, अहिले पनि एउटा कक्षामा ५० प्रतिशत किशोरीहरु बालविवाह गरेका हुन्छन् ।’ छात्रा जनदेवी बुढाले भनिन् । पढिलेखी गाउँ समाजलाई समेत बनाउने लक्ष्य बोकेकी उनलाई विद्यालयकै हरिबिजोग भएपछि जाँगर मरेको छ । चोरले विद्यालयमा सामान्य पानी खाने बाल्टी समेत रहन दिदैनन् । गएको शैक्षिक सत्रमा गंगा मा.वि. पेरेले पालिका स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिताको विजेता बन्यो तर दुर्भाग्य विद्यालयका खेलाडीले कार्यालयमा कप देख्न पाएका छैनन् । चोरी हुने डरले घरमै लुकाएर राखिएको छ ।
कक्षा १० सम्म पढाई भइरहेको यो विद्यालयमा सबै भवनहरु माटोले बनेका छन् । भोतिक संरचना मजबुत नहुँदा विद्यालय बारम्बार चोरको निसानामा पर्ने गरेको गंगा मा.वि. पेरेका प्रधानाध्यापक गोर्ख बहादुर बुढाले बताए । ‘विद्यालय चोर्नै चोर पक्रन सिसि क्यामेरा जडान गरियो, चोर कार्यालय फोडेर सिसि क्यामेरा सहति हार्डडिक्स चोरेर लिए ।’ उनले भने । विद्यालय गाउँ बाट झण्डै एक किमि टाढा रहेकोले चोर का अघि निरिह हुनु परेको प्रअ बुढाले गुनासो पोखे । चोर पक्रन प्रहरिको सहायत लिए पनि असफल भएको उनले बताए । समुदाय बाटै प्रहरि अनुसन्धानमा असहयोग हुँदा चोरलाई प्रोत्साहन मिलेको उनको भनाई छ । ‘विद्यालय प्रति समुदायको चासो नै छैन, प्रहरीलाई अनुसन्धानमा समेत सहयोग भएन’ उनले भने ।
उनका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति सँगको छलफलमा कार्यालय सहयोगीलाई विद्यालयमै बसाल्ने विकल्प बारे छलफल पनि भयो, तर विद्यालय एकान्तमा हुँदा चोर कार्यालय सहयोगी कै ज्यानमा खतरा हुने देखियो । विद्यालय को समस्या प्रति पातारासी गाउँपालिकाले बेवास्ता गरेको प्रअ बुढाले गुनासो गरे । पालिकाले कम्तिमा एउटा पक्कि भवन सम्म निर्माण गरिदिए कार्यालय सुरक्षित हुने उनको भनाई छ ।
पातारासी गाउँपालिका मा चोरको शिकार बन्ने विद्यालय गँगा मा.वि. पेरे मात्रै होइन, डिल्लीचौर प्रहरी चौकीको आडैमा रहेको ऋणमोक्ष मा.वि. मा चोरी भएको छ । दुइ वर्ष अगाडी साउने संक्रान्तिको राती विद्यालयबाट १० वटा कम्प्युटर चोरी भएको पातारासी गाउँपालिका का शिक्षा शाखा प्रमुख जगत बहादुर शाहीले बताए ।
यस्तै पातारासी कै हुरी महरी आधारभुत विद्यालयमा पनि चोरी भएको उनले बताए । ‘पालिकामा हरेक वर्ष २ पक्कि भवन निर्माणका लागी बजेट आउछ, सबै विद्यालयका भवन जीर्ण छन्, क्रमशः जीर्ण भवन भएका विद्यालयमा निर्माण भइरहको अवश्था छ, गँगा मा.वि. पेरेको जटिल समस्या भएकोले पालिकामा छलफल भइरहेको छ ।’ उनले भने । चाटपर्व र मेला महत्सवको मौका छोपी सामुदायिक विद्यालयमा धमाधम चोरी भइरहेको उनले जानकारी दिए । चोर पत्ता लगाउन प्रहरी प्रयासरत रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।